ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရပ်တည်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးဟု ယူဆပါကြောင်းနှင့် အစိုးရ၏ အကြမ်းဖက်သမားများ တိုက်ဖျက်ရေးအပေါ် ထောက်ခံကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး ပြောကြား – Eleven Media Group
အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စဉ်များကြောင့် မောင်တောမြို့မှ ဘူးသီးတောင်သို့ တိမ်းရှောင်လာသူများကို တွေ့ရစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရပ်တည်ချက်မှာ ရှင်းလင်းပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးဟု ယူဆပါကြောင်းနှင့် အစိုးရ၏ အကြမ်းဖက်သမားများ တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပြည်သူသို့ ကူညီနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ် ထောက်ခံပါကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang က စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang က လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ၀င်းမြတ်အေးအား ၀န်ကြီးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် မိတ်ဆွေ မြန်မာနိုင်ငံ အခက်အခဲဖြစ်ချိန် အကူအညီပေးလိုပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စအတွက် ကူညီရေးကို တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ လူမှုရေးတာဝန်အဖြစ် ယူဆပါကြောင်း၊ ယခု မိမိနှင့်အတူ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်း နှင့် ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီးပွားရေးစီမံကိန်းမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကိုပါ အတူခေါ်ဆောင် လာပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအတွက် ကုမ္ပဏီက ကူညီရန် ဆန္ဒရှိပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရပ်တည်ချက်မှာ ရှင်းလင်းပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးဟု ယူဆပါကြောင်း၊ အစိုးရ၏ အကြမ်းဖက်သမားများ တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပြည်သူသို့ ကူညီနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ် ထောက်ခံပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ တိုင်းရင်းသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မြန်မာအစိုးရမှ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုကို တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရမှ ထောက်ခံပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အေးချမ်းသာယာ၍ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးခြင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် အကျိုးကျေးဇူး ရှိမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခု အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် အိုးအိမ် စွန့်ခွာလာရသူများရှိရာ အကူအညီများစွာ လိုအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံမှ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးနိုင်ရန် အဆွေတော် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မည်သို့ ကူညီရမည်ကို ဆွေးနွေးပေးစေလိုပါကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးက ဆွေးနွေးရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ယခုအခါ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် စစ်တွေသို့ ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာသော ခေတ္တ နေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူ ၂၆၀၀၀ ကျော် ရှိပါကြောင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အဆင်ပြေစေရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိပါကြောင်း၊ နယ်မြေ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပါက မူလနေရာ ပြန်နိုင်အောင် စီစဉ်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ကြာရှည်ထားရှိမည် မဟုတ်ပါကြောင်း၊ အိုးအိမ်များ မီးရှို့ဖျက်ဆီး ခံရသဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျရှိစေရေးနှင့် နယ်စပ်ခြံစည်းရိုး ကာရံရေးတို့မှာ အလေးထား ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များမှာ လုံခြုံရေး၊ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးတွင် အိမ်ရာများ ပိုမိုကြံ့ခိုင် ကောင်းမွန်စေရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိအောင် ဖန်တီးပေးရေး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ အကြိမ်များစွာ ရောက်ရှိပြီး အခြေအနေမှန်ကို သိသည့်အတွက် ယခုလို လာရောက် တွေ့ဆုံပြီး အမှန်တရားကို တင်ပြခွင့်ရသည့်အတွက် ၀မ်းသာပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တရုတ်နှင့် မြန်မာစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဟု ယူဆပါကြောင်း၊ အရေးကြုံတိုင်း ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ကူညီသည့် တရုတ်နိုင်ငံအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် သြဂုတ် ၂၅ ရက်မှ စတင်ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသော အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောဒေသ၌ နေထိုင်သူများသည် နေရပ်စွန့်ခွာ၍ နယ်စပ်ဧရိယာ အပါအ၀င် လုံခြုံရာနေရာများတွင် ခိုလှုံနေထိုင်ရလျက် ရှိကြောင်းနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ပြည်တွင်း နေရပ်စွန့်ခွာရသူ တိုင်းရင်းသား ၂၆၇၄၇ ဦး ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အကြမ်းဖက်မှုများ အဆုံးသတ်ရန်အတွက် ချက်ချင်း လုပ်ဆောင်ကြရန် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အင်အား အလွန်အကျွံ အသုံးပြုခဲ့မှုအား စိုးရိမ်မိကြောင်းလည်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီက တံခါးပိတ် အစည်းအဝေးကို စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့အပြီး အဆိုပါကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးကို ဗြိတိန်နှင့် ဆွီဒင်တို့က အရေးပေါ်ခေါ်ယူရန် တောင်းဆိုချက်အရ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများအား ရှုတ်ချခဲ့ပြီး ယင်းဒေသရှိ အကူအညီ လိုအပ်သူများထံ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေး ၀န်ထမ်းများ သွားရောက်ကူညီပေးနိုင်ရေး လုပ်ဆောင်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီက ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်သည် ကိုးနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ လုံခြုံရေးကောင်စီက ထုတ်ပြန်သော ပထမဆုံး ကြေညာချက်ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး မက်သယူးရိုင်းခရော့က ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းကဲ့သို့ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်များသည် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ အားလုံး၏ သဘောတူညီမှု ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ တရုတ်နှင့် ရုရှားတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအား အစဉ်အလာအားဖြင့် ကာကွယ်လေ့ ရှိသည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီသည် သြဂုတ်လ နှောင်းပိုင်းကလည်း မြန်မာ့အရေးအတွက် တံခါးပိတ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ကြေညာချက် မထုတ်ပြန်ခဲ့ပေ။
အလားတူ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယိုဂူတာရက်က မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဘင်္ဂါလီများ (မူရင်းသတင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာဟု သုံးနှုန်းထား) အား စစ်ရေးအရ နှိမ်နင်းမှုကို ရပ်တန့်ရန် မြန်မာအား စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်က တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
Posted in Headline, NewsTagged ဘင်္ဂါလီ, ဘူးသီးတောင်, မောင်တော